Ntughari: Omume Kacha Mma Maka Izere Ma ọ bụ Idozi Oyiri Ndị Ahịa | Martech Zone
Ntughari: Omume Kacha Mma Maka Izere Ma ọ bụ Idozi Data Ndị Ahịa nke Abụọ
Ihe data abuo adighi ebelata eziputa nke ihe omuma ahia, kama o na emebi obi onye ahia gi. Agbanyeghị na onye ọ bụla na - enweta nsonaazụ nke data abụọ - ndị njikwa IT, ndị ọrụ azụmaahịa, ndị nyocha data - ọ nwere mmetụta kacha njọ na arụmọrụ ahịa nke ụlọ ọrụ. Dị ka ndị ahịa na-anọchite anya ngwaahịa na ọrụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ, data na-adịghị mma nwere ike imebi aha gị ngwa ngwa wee bute izipụta ahụmịhe ndị ahịa na-adịghị mma. Oyiri data na ụlọ ọrụ CRM na-eme n'ihi ọtụtụ ebumnuche.
Site na njehie mmadụ nye ndị ahịa na-enye ozi dịtụ iche na isi oge dị iche iche na oge na nchekwa data nzukọ. Dịka ọmụmaatụ, onye na-azụ ahịa depụtara aha ya dị ka Jonathan Smith na otu ụdị na Jon Smith na nke ọzọ. Ihe ịma aka dịwanye njọ site na nchekwa data na-eto eto. Ọ na-esiri ndị ọchịchị ike ịgbaso usoro DB yana soro data dị mkpa. Ọ na-akawanye njọ iji hụ na nzukọ DB-anọgide na-ezi ezi.
Natik Ameen, Ọkachamara n'ahịa Ahịa Canz
N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ụdị data okike dị iche iche, yana ụfọdụ usoro enyemaka ndị ahịa nwere ike iji wepu ọdụ data ụlọ ọrụ ya.
Dị data oyiri dị iche iche
A na-akọwakarị data okike dị ka otu nke mbụ. Mana e nwere ụdị data okike dị iche iche na-agbakwunye mgbagwoju anya na nsogbu a.
Kpọmkwem oyiri na otu iyi - Nke a na - eme mgbe a na - ebufe ihe ndekọ sitere na otu data data na data data ọzọ na - echeghị usoro dabara na njikọ ọ bụla. Ihe atụ ga - abụ i copomi ozi site na CRM gaa na ngwa ahịa email. Ọ bụrụ na onye ahịa gị debanyere aha na akwụkwọ akụkọ gị, mgbe ahụ ndekọ ha adịlarị na ngwa ahịa email, na ịnyefe data site na CRM gaa na ngwá ọrụ ahụ ga-emepụta ụdị oyiri nke otu ụlọ ọrụ ahụ.
Kpọmkwem oyiri na otutu isi mmalite - Ezigbo oyiri na otutu isi mmalite na-ebilite n'ihi atumatu ndabere data na ụlọ ọrụ. Ndị otu na-ajụ ọrụ nhichapụ data, ma nwee ike ịchekwa ụdị data niile ha nwere. Nke a na - eduga na ụzọ dị iche iche nwere ozi abụọ.
Ihe dịgasị iche iche dị n'ọtụtụ ebe - Oyiri nwere ike idi na ozi di iche iche. Nke a na - adịkarị mgbe ndị ahịa gafere ngbanwe n'aha ikpeazụ, aha ọrụ, ụlọ ọrụ, adreesị ozi-e, wdg. Ebe ọ bụ na enwere esemokwu pụtara ìhè n'etiti ochie na ndekọ ọhụrụ, a na-emeso ozi na-abata dịka ihe ọhụrụ.
Abughi ezi oyu na otu ma obu otutu uzo - Otu oyiri na-ezighi ezi bụ mgbe uru data pụtara otu ihe, mana a na-anọchi ya n'ụzọ dị iche iche. Iji maa atụ, a pụrụ ichekwa aha Dona Jane Ruth dị ka Dona J. Ruth ma ọ bụ DJ Ruth. Niile ụkpụrụ data na-anọchi anya otu ihe ahụ mana ma e jiri ya tụnyere usoro dị mfe data dabara, a na-ewere ha dị ka ndị na-abụghị ndị.
Dupuplication nwere ike bụrụ usoro dị mgbagwoju anya ebe ndị ahịa na azụmaahịa na-agbanwezi kọntaktị ha na oge. Enwere esemokwu na otu ha si abanye mpaghara data ọ bụla - site na aha ha, adreesị ozi-e (es), adreesị ebe obibi, adreesị azụmahịa, wdg.
Nke a bụ usoro omume kacha mma nke 5 data nke ndị ahịa nwere ike ịmalite iji taa.
Usoro 1: Nwee ndenye ego na ntinye data
Ikwesiri inwe njikwa nkwado siri ike na saịtị ntinye data niile. Nke a na-agụnye ijide n'aka na data ntinye na-adaba na ụdị data achọrọ, usoro, na ụgha n'etiti usoro dị mma. Nke a nwere ike ịga ogologo oge iji mee ka data gị zuo oke, dị irè, ma zie ezi. Ọzọkwa, ọ dị oke mkpa na arụ ọrụ ntinye data gị abụghị naanị ahazi iji mepụta ndekọ ọhụụ mana nyocha mbụ wee chọpụta ma dataset ahụ nwere ndekọ dị adị dabara na nke na-abata. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ọ na-achọta na mmelite, karịa ịmepụta ndekọ ọhụrụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ etinyela ego maka ndị ahịa iji dozie data ha nke ha.
Strategy 2: Mee Dupuplication Iji Akpaaka Ngwaọrụ
Jiri ọrụ onwe gị ntinye data ntinye data nke nwere ike inyere gị aka ịmata na ihicha ihe ndekọ abụọ. Ngwaọrụ a nwere ike dozie data, na-achọta ezigbo egwuregwu na nke na-ezighi ezi, ha gbuputara ọrụ aka nke na-elele ọtụtụ puku ahịrị nke data. Gbaa mbọ hụ na ngwa ọrụ ahụ na-enye nkwado maka ịbubata data sitere n'ọtụtụ ebe dị iche iche dịka excel sheets, CRM database, ndepụta, wdg.
Usoro 3: Jiri usoro ntinye ederede nke data
Dabere na ọdịdị nke data, ntinye data na-eme n'ụzọ dị iche. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịkpachara anya mgbe ha na-edekọ data n'ihi na otu ihe ahụ nwere ike ịpụta ihe dị iche na njirimara data dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndekọ data abụọ dakọtara na adreesị ozi-e, mgbe ahụ enwere nnukwu ohere na ha bụ oyiri. Mana ọ bụrụ na ndekọ abụọ dakọtara na adreesị, mgbe ahụ ọ bụchaghị otu, n'ihi na mmadụ abụọ sitere n'otu ezinụlọ nwere ike ịnwe ndebanye aha dị iche na ụlọ ọrụ gị. Yabụ ijide n'aka itinye ntinye data, ijikọ, na ịmecha usoro dịka ụdị data data gị nwere.
Strategy 4: nweta The Golden Master Record Site Enrichment data
Ozugbo ị kpebisiri ike ndepụta nke egwuregwu dị na nchekwa data gị, ọ dị oké mkpa iji nyochaa ozi a tupu ịmekọrịta data ma ọ bụ ịmecha mkpebi nwere ike ịme. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndekọ dị maka otu ụlọ ọrụ na ụfọdụ na-anọchi anya ozi na-ezighi ezi, mgbe ahụ ọ kachasị mma ikpochapụ ihe ndekọ ndị ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ederede abụọ ezughi oke, mgbe ahụ ịjikọ data bụ nhọrọ ka mma ka ọ ga - eme ka ịbawanye data, na ndekọ jikọtara nwere ike tinye uru karịa azụmaahịa gị.
Kedu ụzọ ọ bụla, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịrụ ọrụ iji nweta otu echiche nke ozi ahịa ha, nke a na-akpọ ọla edo ukwu ndekọ.
Usoro 5: Nyochaa njirimara ogo data
Mgbalị na-aga n'ihu iji mee ka data gị dị ọcha ma deduped bụ ụzọ kachasị mma iji mezuo usoro ntinye data gị. Ngwá ọrụ nke na-enye njirimara data na njirimara njikwa njikwa nwere ike ịba ezigbo uru ebe a. Ọ dị oke mkpa ka ndị na-ere ahịa lekwasị anya na etu esi ezi, nke ziri ezi, zuru ezu, nke puru iche, na nke na-agbanwe agbanwe nke data a na-eji maka arụmọrụ ahịa.
Ka otu dị iche iche na-aga n'ihu itinye ngwa data na usoro azụmaahịa ha, ọ dịla mkpa maka ahịa ọ bụla inwe usoro ntinye data na ebe. Ebumnuche dịka iji ngwaọrụ ntinye data, na ịdepụta arụmọrụ nkwado ka mma maka ịmepụta na imelite ndekọ data bụ ụfọdụ atụmatụ dị oke mkpa nke nwere ike ime ka ogo data dị ntụkwasị obi na nzukọ gị.
Banyere Data Ladder
Data Ladder bụ usoro njikwa njikwa data nke na-enyere ụlọ ọrụ aka nhicha, ịkọwapụta, ịhazi, ịhazi ihe, ịkọwapụta, na ịbawanye data ha. Ngwongwo ngwanrọ anyị na-eduga na ụlọ ọrụ na-enyere gị aka ịchọta ndekọ ndị kwekọrọ, jikọta data, ma wepu oyiri site na iji ọgụgụ isi na-enweghị atụ na algorithms mmụta igwe, n'agbanyeghị ebe data gị dị na usoro
Budata Nnwale efu nke sọftụwakọ data data data
Tags: adreesị ọkọlọtọaiAmamịghe echichenwere ike ahiaahịa datanhazi usoronhicha datainyekwu datadata ububendakọrịta datadata profaịlụnhazi ụkpụrụ datantinyeitinyeoyiri ahịa datafuzzy kenhangwa igwenat ameen
Zara Ziad bụ ọkachamara nyocha ahịa ngwaahịa na Data Ladder nwere ndabere na IT. O nwere obi uto banyere imepụta usoro ihe okike okike nke na-eme ka ihe omuma data nke uwa nke ndi otu otutu chere taa. Ọ na-ewepụta ọdịnaya iji kpọtụrụ azịza, ndụmọdụ, na omume ndị nwere ike inyere ndị azụmaahịa aka itinye ma mepụta ogo data sitere na usoro ọgụgụ isi azụmaahịa ha. Ọ na-agba mbọ ịmepụta ọdịnaya echebere maka ọtụtụ ndị na-ege ntị, sitere na ndị ọrụ teknụzụ ruo onye ọrụ njedebe, yana ire ya na ntanetị dị iche iche.
Na-arụ ọrụ na faịlụ .htaccess Na WordPress